Scot Nepal – Page 6
वामदेव गौतमको नयाँ पार्टीबारे खगेन्द्र संग्रौलाले गरे यस्तो कडा टिप्पणी
काठमाडौं । बरिष्ठ साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले वामदेव गौतमले कासी जाने बेलामा पार्टी खोलेको बताएका छन् ।वामदेव गौतमले कासी जाने वेलामा पार्टी खोलेकोले दुनिया यसैमा चकित भएको र बुढो पुस्ताले, संवेग, विचार, क्रियाशीलमा...
खोलावारी घर छ, मन्त्री क्वार्टर ओगटेर रामकुमारी पुल्चोकमै
काठमाडौँ – निवर्तमान शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आफ्नै घर शंखमूलमा छ । तर उनले पद छोडेको झण्डै एक साता बितिसक्दा पनि पुल्चोकस्थित सरकारी निवास छोडेकी छैनन् । झाँक्रीले क्वार्टर खाली नगरिदिँदा गत...
पूर्वमाओवादीबिच एकताको कुरा कति भ्रम कति सत्य ?
काठमाडौं – नेपालमा पुन कम्युनिष्ट एकताबारे बहस हुँदै गर्दा शिर्षस्थ नेताहरु भने जुहारीमाव्यस्त देखिएका छन । समय र परिस्थीले एकताआवश्यक रहेको बताउने उनीहरु कस्तो एकताभन्ने विषयमाभने अलमल देखिन्छन । स्थानीयतहनिर्वाचनको मत परिणामसंगै...
शुन्य समर्थन, म एक्लै लड्छु : सन्दीप
काठमाडौ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ओन्टारियोसँगको अभ्यास खेलपनि कसैको समर्थन नभएको ट्वीट गरेका छन् । आईसीसी विश्वक लिग टू अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालली टोलीले शुक्रबार राति त्यहाँको...
Previous 1234567 8910 11 … 362 Next